Sehatry ny vato sarobidy Hetsika goavana no tanterahana eny amin’ny MBC Ivato
Orinasa Malagasy Tsy misy ary tsy ampy ny fiofanana
Olana tanteraka eto Madagasikara ny tsy fahampiana sy tsy fisian’ny fampiakarana ny faripahaizana sy ny fahaiza-manaon’ny isam-batan’olona eo anivon’ny orinasa.
Fampandrosoana ara-toekarena Tsy marin-toerana ny harifaobe eto Madagasikara
Miainga amin’ny fahamarinan-toeran’ny harifaobe (stabilités macroéconomiques) ny fiaingan’ny toekarena kanefa tsy mbola misy mihitsy izany eto amin’ny firenena.
Voalohany eto Madagasikara ny fisiana hetsika lehibe momba ny vato sarobidy dia ny Salon des gemmes et des bijoux. Nanomboka omaly eny amin’ny Mining Business Center (MBC) Ivato izy io ary hifarana amin’ny sabotsy 27 oktobra izao.
Tanjona amin’ity hetsika izay karakarain’ny Bureau du Cadastre Minier de Madagascar (BCMM) sy ny Institut de Gemmologie de Madagascar (IGM) ity ny fampahafantarana ny sehatry ny harena ankibon’ny tany Malagasy ho an’ny mpisehatra sy ny mpandraharaha ary ny olon-drehetra na ny eto an-toerana io na ny any ivelany. Zava-dehibe ity hetsika ity, hoy ny minisitry ny harena ankibon’ny tany sy ny solitany Henry Rabary Njaka. Natokana ho an’ireo matihanina amin’ny sehatry ny harena ankibon’ny tany ilay hahafahana mampiranty sady mivarotra ny vokatra ihany koa. I Madagasikara rahateo, dia anisan’ireo firenena manana vato sarobidy tena tsara kalitao maneran-tany. Ho an’ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao izay nanatrika ny lanonana omaly kosa dia nanipika fa mila fandrindrana ny fitrandrahana ny harena tahaka izao izay tsy azo havaozina intsony. Ilaina ny fiaraha-miombon’antoka amin’ny vahiny, hoy izy fa tsy maintsy misy kosa ny fifanakalozana traikefa sy fampitana ny fahaiza-manao. Mazava ho azy tsy maintsy atao ao anatin’ny fanajana ny tontolo iainana, ny lalàna ny asa ary niantso ireo mpandraharaha amin’io sehatra io ny tenany mba hiditra ao anatin’ny sehatra ara-dalàna.